चैत्र ७, काठमाण्डौ । नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा युवा पर्यटन व्यावसायीका रुपमा स्थापित छन राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका सापकोटा पर्यटकीय संघसंस्थाको प्रवद्र्धनमा सक्रिय छन ।
केही समययता नेपाल पर्यटन बोर्ड र टान बिचको टिम्स रकम प्राप्त गर्ने बिषयलाई लिएर बोर्ड र टानबिच असमझदारीको स्थीति देखिएको छ । सतही रुपमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोपको स्थीति देखिरहँदा कतिपय व्याक्तिले आफुले पर्यटनबोर्ड बाट टानको लागि रकम निकासा हुन नदिएको भनेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । आफु सधै टानले टिम्सबापतको रकम पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउने सापकोटा सँग टान र पर्यटन बोर्डबिचको बास्तबिक बिवाद के हो भनि सोधेका छौ ।
प्रश्तुत छ, नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा सँगका केही सवाल ।
१. टानले प्राप्त गर्नुपर्ने टिम्स रकम रोकिनुमा बोर्ड समिति सदस्यका नाताले तपाईले भुमिका खेल्नुभयो भन्ने आरोप छ नी, हो ?
हेर्नुस, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबिच एमओयू हुँदाबखत टिम्सबापतको कुल रकमको ३० प्रतिशत नेपाल पर्यटनबोर्डले, ३० प्रतिशत टानले, ३० प्रतिशत बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा जाने व्यवस्था छ । बाँकी १० प्रतिशत मजदुरको खातामा जाने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, यसको कार्यबिधी पनि बनिरहेको छ ।
जहाँसम्म पर्यटन बोर्डले टानलाई टिम्स बापतको रकम दिनुपर्ने भन्ने कुरा छ, यसमा अबिलम्ब रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सधै आवाज उठाईरहेको व्याक्ति हुँ । यद्यपी कुनै एक कार्यसमितीले पर्छौट गरेन भनेर समग्र टानलाई बन्धक बनाउँन पाईदैन, दोसी देखिए सम्बन्धीत पक्षलाई गर्नुपर्छ तर टानको खातामा रकम रोकिनुहुँदैन भनेर बोर्डमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु ।
यसर्थ बोर्ड सदस्यका नाताले मैले राजनीति गर्यो, पैसा रोक्यो भन्ने जतिपनि कुरा छ, यो फगत मेरो छबि बिगार्ने कोशिस मात्रै हो, बाहिर हल्ला गरेर केही हुनेवाला छैन, टानलाई पैसा रोक्नमा मेरो संलग्नता छ, भनेर कसैले प्रमाणित गर्छ भने १ मिनेट पनि म बोर्डमा रहने छैन, यो मेरो चुनौती हो । अर्कोकुरा टानलाई हिजो आर्थिक रुपमा अप्ठेरो पर्दा पनि व्याक्तिगत तर्फबाट मबाट भएगरेका प्रयासहरुले पनि मलाई त्यतापट्टि सोच्न दिदैन । टान र मेरो सम्बन्ध भावनात्मक हो, लेनदेनको होईन ।
२. तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तर टानले आफ्नै खातामा पाउनुपर्ने त्यही ३० प्रतिशत रकम पनि प्रयोग गर्न नपाउने स्थीति छ, अनि?
हेर्नुस, कुनै एक सदस्यले नचाहेर नदिएको भन्ने कुरा आफैमा निराधार छ । ११ सदस्यीय बोर्डसमितीमा अध्यक्ष, सिईयो लगायत अन्य बिशिष्ट व्याक्तिहरु पनि हुन्छन, भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । यसले आफै प्रष्ट हुन्छ, की एक सामान्य सदस्यको अधिकार क्षेत्र । जहाँसम्म रकम रोकिएको सन्दर्भ यो पनि हो की, यसअघि टान र पर्यटन बोर्डबिच रकम निकासा हुँदा टानले पर्छौट गर्न बाँकी रहेका कारण लेखापरिक्षण र श्रम सम्बन्ध समितिले नै पर्छौट नभई रकम निकासा नगर्नु भनेर बोर्डलाई भनिएको अवस्था हो । रकम निकासाकै सन्दर्भमा बोर्डका पदाधिकारीहरु यसअघि छानबिनमा परेको सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो ।
यसर्थ यही भन्न चाहन्छु, टानले पनि हिसाव पर्छौट गर्नुपर्छ, कुनै एक नेतृत्वले गलत काम गर्यो भनेर अन्यलाई दोशी मान्न सकिन्न । यस्तोमा मैले जहिले पनि एकसुत्रिय मागकै रुपमा टानले पाउने रकम पाउनुपर्छ भनेर लागिराखेको छु । टानलाई असहयोग गर्ने कुरा गलत हो ।
३. टानले रकम पाउनुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौ भनेर यहाँहरुले भनिरहने तर टानको आर्थिक भार चै लिलामीकै स्थातिमा पुग्न लाग्दा पनि यहाँहरुको ध्यान नजाने रहेछ अनि ? टानले आफुले पाउने रकम चै मृतअवस्थामा पुगेपछि मात्रै पाउने हो ?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन, किनभने अघिल्लो बर्ष बर्तमान कार्यसमितीलाई नै अप्ठेरो टार्न भनेरै १ करोड ८८ लाख रकम कार्यसमितीको रोहबरमा अग्रिम रुपमा बोर्डबाट रकम निकासा भएको छ । त्यो रकम पर्छौट भयो भएन मलाई खास थाहा छैन । यसमा अन्य बोर्डपदाधिकारीहरुले हेरिरहनुभएको छ । हामी सबै मिलेर टानलाई माथि उकास्नु पर्छ । पर्यटन बोर्डले दिनुपर्ने रकम दिनुपर्छ, टानले जसरी पनि पैसा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म जहिल्यै अडिग छु । बेरुजुलाई पनि मिलाउँदै जानुपर्छ ।
४.टान र पर्यटन बोर्डबिचको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
टानले पनि संयमित भएर बोर्डसँगको छलफलमा आउनुपर्छ । दुबैपक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नभई दुईपाईलो अगाडि सार्दै गर्दा एकपाईलो पछाडि सार्ने नितीमा आउनुपर्छ । भन्न खोजेको पर्छौट गरेन भनेर टानलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन, जो दोसी हो उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने बोर्डले पनि टानले प्राप्त गर्ने रकम रोक्न मिल्दैन । पर्यटनको बिकासमा टान, हान, नाट्टा लगायतका संस्थाको भुमिका अहंम छ । यिनीहरु नै रहेनन भने बोर्ड एक्लै जतिछिटो दौडिए पनि कहीं पुग्न सक्दैन, यसलाई सबैले बुझ्दा राम्रो ।